Alaabada Qalalan | Istaraatiijiyad Xul Ah oo Alaabeed Qubays Raaxo Leh, Qubays Wanaagsan Aad Ayuu Muhiim U Yahay!
Bogga ugu weyn / blog / Alaabada Qalalan | Istaraatiijiyad Xul Ah oo Alaabeed Qubays Raaxo Leh, Qubays Wanaagsan Aad Ayuu Muhiim U Yahay!
2021 / 04 / 08 Qoondayntablog 5225 0
Nolosha xawliga ku socota ee reer magaalku marar dhif ah ayey u helaan waqti ay ku qooyaan qubays si ay ugu nastaan, inta badanna iyagoo adeegsanaya habka qubeyska ee qubeyska. Xaqiiqdii, qalabka qubeyska ayaa sidoo kale bilaabay inuu yeesho howlaha dhibcaha duugista socodka biyaha, yareeyo daalka jirka iyo maskaxda, si loo abuuro qallalan, meel lagu maydho oo raaxo leh ayaa sidoo kale kuu keeni kara nolol caafimaad leh.
Albaabbada qubaysku waxay abuuraan suul musqusha leh oo ay ku kala baxaan qallalan iyo qoyan
Qaab xul ah: oo ku saleysan cabirka aagga musqusha
Qaabka guud ee albaabka qubeyska waxaa ku jira eray, L-qaabeeya, shan geesle, arc, S-qaabeeya iyo qaab T, iwm. Albaabka qubeyska ee musqusha yar ayaa ka badan kan L-qaabeeya, shan geesoodlaha ah; arc, T-shaped, S-shaped, iwm waxay ku habboon yihiin musqulaha waaweyn.
Markaad dooranayso qaabka albaabka qubaysku sidoo kale u baahan yahay inaad fiiro gaar ah u yeelatid habka loo furo albaabka. Guud ahaan marka laga hadlayo, albaabka riix-furan wuxuu u baahan yahay inuu yeesho meel lagu fidiyo, albaabka rogmadana ma qaadan doono boos kale.
U fiirso walxaha: 8 mm muraayad qaro weyn leh oo shaashadda loogu talagalay guddiga ayaa wanaagsan
Albaabada qubaysku guud ahaan waa aluminium aluminium ah sida jir ahaan, oo leh muraayado la xoojiyay iyo qalabka acrylic. Dusha sare ee guddiga wuxuu u qaybsan yahay laba hufan iyo laba-mid hufan, hufnaan ayaa loo qaybin karaa qaab socodka, qaabka ilmada, qaabka baarka loo yaqaan 'balsam pear'.
Xullo xayndaabyo hufan waa inay isticmaalaan muraayad la xoojiyay si loo sameeyo alwaaxyo, dhumucdiisuna waa inay ka badan tahay 8 mm ama ka badan. Markaad dooranaysid alaabada loo yaqaan 'acpalic acrylic', waxaa muhiim ah in la arko in gudigu fududahay in la jabiyo, albaab sare oo dabaq ah oo aad u sarreeya oo leh muraayad lagu xoojiyay guddiga, oo leh albaabka qubeyska furan.
Frak PK Frameless: alwaaxa qubayska aan xurmada lahayn waxay dheereyn karaan saameynta muuqaalka
Rakibaadda dhabta ah ee albaabbada qubeyska ee qaabaysan waxay qaadataa meel badan, sidaa darteed waxaa guud ahaan lagu talinayaa in la doorto albaabbada qubayska aan xayndaabka lahayn, gaar ahaan musqulaha yar yar, halkaasoo albaabbada qubeyska bilaa qaab ah ay ku gaari karaan saameyn ballaarineed oo muuqaal ah.
Albaabbada qubayska aan xaddidneyn ee go'an ayaa loo qaadan karaa in ay yihiin nooca ulaha xoogga oo yaraaday, gundhig iyo nooca ganaaxa, kuwaas oo gundhiggu uu noqon doono midka ugu xasilloon oo leh gabal go'an oo gebi ahaanba ku duuban jeexdinka ka sarreeya albaabka albaabkiisa. Intaas waxaa sii dheer, awoodda dhismeedka darbigu sidoo kale waa tixgelin muhiim ah xulashada albaabbada bilaa biraha ah, haddii darbiyada musqusha ay yihiin darbiyo fudfudud, derbiyada waxaa ugu yaraan laga buuxiyaa sibidh xumbo leh si loo hubiyo badbaadada isticmaalka.
Xadhkaha albaabka iyo faahfaahinta kale: habsami iyo waara, fiiro gaar ah u yeelo astaamaha aadanaha
Raadinta albaabka qubayska haddii adeegsiga boodhka balaastigga ah ee caagga ah, uu dhaqso u jabin doono waddada, lumiyo shaqada furitaanka si xor ah. Jidka hagaagsan ee albaabku wuxuu ka samaysan yahay naxaas, goos goosku waa maaddada loo yaqaan 'nylon', sidaa darteed riixitaanka iyo kor u qaadistu waa u siman yihiin oo waarayaan, waana inay sidoo kale fiiro gaar ah u yeeshaan haddii aluminiumka iyo saxanka derbiga iyo jidadka xidhan ee tolku adag yahay. Haddii kale, riixid iyo jiidasho isku-dheelid muddo-dheer ah oo fududaanaysa in albaabku dabco.
Hadda faahfaahinta albaabka qubeyska ayaa si tartiib tartiib ah u qaabeysay naqshadeynta bani'aadamnimada, isugeyntiisa ayaa ka faahfaahsan, geesaha wareegaya, geesaha sidoo kale waa la sharraxay, ma jiro waddo ka hooseysa albaabka jiida, kursiga curyaamiintu si toos ah ayuu u soo geli karaa, in ka badan ayuu la jaan qaadayaa casriga casriga ah. baahan alaab nololeed casri ah.
Rakibaadda iyo dhismaha: fiiro gaar ah u yeelo meesha godka bullaacadda ka baxayo kana tag farqiga u dhexeeya si looga fogaado oksijiin la'aan
Saaxiibbo badan ayaa ogaaday in aysan ku ridi karin albaabka qubeyska ka dib markii ay qubeysteen barkadda qubeyska, badanaa sababta oo ah booska godka bullaacaddu aad buu u fog yahay, sidaa darteed ka hor inta aan la rakibin albaabka qubayska, fiiro gaar ah u yeelo booska daloolka iyo kala duwanaanta dhererka dhulka, ama Weydiiso kooxda qurxinta inay bixiso qorshaha khadka tuubada si looga fogaado meesha qubayska inay u soo ururiso oo u faaruqiso biyaha si caadi ah.
Intaa waxaa dheer, sababo nabadgelyo awgood, waxaa lagugula talinayaa inaad ka tagto farqiga u dhexeeya 0.5 ilaa 1 cm korka albaabka qubeyska si looga fogaado oksijiin la'aan inta lagu jiro qubayska, iyo albaabka albaabka waxaa lagu rakibi karaa nooca jiidaya ama nooca gawaarida halkii riixitaan ku qor nambarka albaabka, si albaabka loo furo markii ugu horreysay haddii shil dhaco.
Hawlaha hodanka ah ee 'Shower column' si ay ula kulmaan cadaadiska magaalooyinka ee xawaaraha ku socda
Taabo oo dareemo maaddadu inay dareemayaan: habsami iyo dhalaal
Qalabka shaashadda shaashadda qiyaas ahaan waxaa loo qaybin karaa darfaha looxa, aluminium, isku-dhafka naxaasta, birta aan lahayn, muraayadda la xoojiyay dhowr qaybood, taas oo iyaduna, qaab wanaagsan, mugga yar ee aluminiumyada iyo birta aan inta badan la isticmaalin.
Xulashada tiirarka qubeyska ayaa marka ugu horreysa taaban kara dariiqa si aad u dareento dusha sare iyo dusha sare, oo ay ku xigto si taxaddar leh u fiiriyo in shaabadda galka qubaysku uu siman yahay, haddii kala-goysku dillaacay, kuwan waa in si taxaddar leh loo baaro.
Xulashada dhererka: tixgeli safka qubeyska kaliya marka dhererka dabaqa uu yahay 2.7 mitir ama ka badan
Heerka caadiga ah ee qolka ganacsiga caadiga ah waa 2.5 mitir, halka dhererka caadiga ah ee safka qubeyska uu yahay 2.2 mitir. Haddii aad rakibto oo aad dhulka kor ugu qaaddo 15 cm, waxay noqon doontaa mid aan ku habboonayn in la isticmaalo, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad ka fiirsato adeegsiga safka qubayska marka dhererka dabaqaagu gaaro 2.7 mitir ama ka badan.
Dhererka saqafka sare ee musqusha iyo dhererkaaga ayaa go'aaminaya dhererka qubayska. Guud ahaan, tuubada dhulka waa 70-80 cm, wiishka wiishka waa 60-120 cm sare, tuubada iyo tiirarka qubayska dhererkiisu waa 10-20 cm, dhererka maydhashada dhulka waa 1.7-2.2 m. Macaamiisha waa inay si buuxda u tixgeliyaan cabbirka booska musqusha markay wax iibsanayaan.
Qalabka kormeerka faahfaahsan: fiiro gaar ah ulaha tolliinka iyo waalka
Badanaa fiiri tiirarka maydhashada iyo tuubbada tubbada haddii uu jiro trachoma ama dildilaac. Trachoma waa dusha walxaha maarta ah waxayna ku dhex jirtaa habka loo ridayo godadka yaryar iyo dildilaaca, haddii uu jiro trachoma, biyuhu way daadan doonaan biyaha ka dib, jabka culus ayaa dhici doona.
Xaqiiqdii, tuubbada tuubada ayaa ah qeybta ugu muhiimsan laakiin isha qaawan ma arki karto, xogta ayaa muujineysa in miiqda aqoonta leh la beddeli karo 500,000 jeer, illaa iyo inta awoodani ay fududahay in la daadiyo. Markaad dooraneyso tiirka qubeyska, macaamiisha waxay weydiinayaan ganacsadaha inuu siiyo xogta alaabada isbarbardhig iyo tixraac.
Hubi saameynta tiirarka qubeyska: ku doorto shaqada qubeyska iyadoo lagu saleynayo u dhiganta cadaadiska biyaha
Cadaadiska biyaha ayaa ah qodobka ugu weyn ee go'aamiya waxtarka tiirarka qubeyska, sidaas darteed waa muhiim in lala tashado cadaadiska biyaha ee loo baahan yahay ka hor intaadan soo iibsan badeecada, haddii kale safka qubeyska waxtar ma yeelan doono xitaa haddii la rakibo. Waad iska hubin kartaa cadaadiska biyaha ee gurigaaga ama waxaad weydiin kartaa xirfadle inuu cabbiro cadaadiska biyaha inta aan la rakibin, ka dibna rakibi mootada xoojisa haddii cadaadiska biyuhu uusan ku filnayn.
Iyadoo lagu saleynayo iswaafajinta cadaadiska biyaha, dadka isticmaala waxay dooran karaan howlaha qubeyska iyadoo loo eegayo baahida qoyskooda. Sida nidaamka heerkulbeegga ee leh saxitaanka saxda ah ee heerkulka biyaha, nidaamka duugista oo leh xakameyn badan oo boos, iwm, oo kaa caawinaya inaad gebi ahaanba isdejiso oo aad yareyso jirkaaga mashquulka badan ee daalay intaad qubeysaneysid.
Rakibaadda iyo dhismaha: masaafada u dhexeysa tuubooyinka tubbada, tubbada biyaha kulul iyo kuwa qabow
Fiiro gaar ah u yeelo in dhererka tiirarka qubayska iyo masaafada tuubbada tubbada ay la jaan qaadi karaan booska musqushaada. Ka hor intaadan rakibin tiirarka qubeyska, waxaad u baahan tahay inaad ku cabirto masaafada u dhexeysa qasabadaha biyaha qabow iyo kuwa kulul iyadoo la adeegsanayo cajalad lagu cabbirayo, maxaa yeelay masaafada u dhexeysa tuubooyinka soo gala way kala duwan yihiin iyadoo ku xiran hadba badeecada, guud ahaan qiyaastii 15 cm.
Qubeyso fursado kala duwan oo leh baahiyaha guriga
Nooca darbiga la aasay PK: jawiga nooca darbiga la aasay, nooca laalaada oo si sahlan loo rakibo
Darbiga la aasay waxaa loola jeedaa dariiqa tuubada ee lagu aasay darbiga ama saqafka, sida qubays weyn oo laba jibbaaran oo si toos ah loogu dhejiyay darbiga waxaa iska leh noocan. Faa'iidada nooca derbiga la aasay waa quruxda guud ee booska musqusha, qubeyska si toos ah darbiga ama biyaha saqafka, siman oo qulqulaya, oo ku habboon in lagu isticmaalo aag ballaaran oo ka mid ah qolka qubeyska.
Nooca sudhan sida magacu tilmaamayo waxaa lagu sudhay darbiga, iyada oo loo marayo sadarka qubayska ee ku xidhan ama qubeyska gacanta lagu hayo, faa iidada nooca laalaadku kuma lug laha duminta gidaarka iyo arrimo kale, oo aad looga isticmaalo nooca darbiga la aasay, isticmaal si looga fogaado jiidaya tiirarka qubeyska si ay u soo saaraan khatar ruxaysa.
Waxyaabaha birta ah ee 'PK silicone': silikoon madaxa qubeyska waa fududahay in la nadiifiyo
Madaxa qubeyska ee suuqa guud ahaan wuxuu u qaybsan yahay bir iyo silikoon laba nooc oo walxo ah, birta qubeyska birta qaabkeeda oo qurux badan, laakiin nadiifinta madaxa qubeyska silikoonka ayaa aad ugu habboon, maxaa yeelay haddii ay dhacdo xiritaan khafiif ah, waad cadaadin kartaa ama isticmaali kartaa irbad si loo daboolo daloolka biyaha ee silikoonka.
Marka lagu daro qalabka biraha iyo silikoonka si loo muujiyo habka, qubaysyada qaar ayaa sidoo kale lagu soo bandhigi doonaa banaanka daloolka biyaha, qaabka caagku wuxuu dareemayaa mid adag, oo aad ugu habboon in la nadiifiyo.
Qubeyska dhinac lagu buufiyo PK qubeyska gacanta: buufinta dhinaca waxay ku raaxeysaneysaa raaxaysiga qubayska, ku mayrida nabdoonaanta gacanta ee meesha taal
Qubeyska dhinac lagu buufiyo guud ahaan wuxuu ku dhegan yahay safka qubeyska, oo leh qubeyska kore iyo qubeyska gacanta, si loo keeno khibrad qubays leh. Kahor inta aan la rakibin, lambarka iyo goobta uu ku buufinayo dhinac dhinac ayaa horay loo sii qorsheeyay iyadoo loo eegayo baahida loo qabo, iyadoo la qorsheynayo barnaamij cusbooneysiin biyo-mareenka wanaagsan, waa in la ogaadaa in dhinaca lagu buufiyo dhinaca dhinacna loo habeyn karo siyaabo kala duwan iyo weliba jihada biyaha, marka kaliya fur waalka, ha u jeedin dhinaca lagu buufinayo, si aanad u keenin dhaawac shil ah cadaadiska biyaha oo aan degganeyn. Dadka badanaa dib u noqda, dhabar xanuunka, waxaa lagugula talinayaa inay doortaan qubayska dhinaca lagu buufiyo, iyada oo loo marayo duugista biyaha, waxay door ka ciyaari karaan yareynta xanuunka.
Roob gacmeedka ayaa amaan ah in la isticmaalo, gaar ahaan marka uusan jirin qasabad kuleylka kuleylka leh oo lagu rakibay, waxay ka hortagi kartaa kicinta ama kicinta biyaha kulul ee kadiska ah marka aad furto waalka biyaha, ee ku habboon waayeelka iyo carruurta. Adiga oo isticmaalaya qubeyska gacanta lagu dhaqo, waxaad ku maydhan kartaa qayb ka mid ah jirka meel u dhow isla markaana badbaadin kartaa biyo badan. Haddii qof qoyska ka mid ah uu qabo dhibaatooyin xagga dhaqdhaqaaqa ah oo uu u baahan yahay inuu ku fadhiisto qubayska, qubeyska gacanta ayaa doorkiisa ka sii ciyaari kara xitaa.
Naqshadeynta biiyaha qubayska: inta ay le'eg tahay tirada nozzles-yada waxay buufin kartaa inta u dhexeysa, saamaynta hufan ee muuqata
Iibsashada qubayska marka lagu daro indha indheynta qulqulka biyaha buufisku waa isku mid, naqshadeynta biiyaha ayaa sidoo kale si toos ah u saameyn doonta qaabka socodka biyaha, nozzles waxaa loo qaybin karaa nooca hal-dalool (khaanadda biyaha tooska ah) iyo nooca godadka badan (ceeryaamo, irbad u eg socodka biyaha), iyadoo saameyn ku yeelaneysa xoojinta iyo xoogga buufinta biyaha, taasoo keentay sameynta roob, nooca duugista ah ee lagu maydho biyaha. Guud ahaan, tirada sii kordheysa ee biiyaha biyaha ayaa buufin kara nooc ballaaran. Waad xiri kartaa saameynta booska jirka ee baahiyaha shaqsiyeed si loo gaaro saameynta isboortiga.
Cadaadiska biyaha iyo mugga biyaha qubeyska waxay saameyn weyn ku leeyihiin raaxada qubeyska, sidaas darteed waxaa lagugula talinayaa inaad doorato qubeys leh cadaadis biyo oo sareeya sida ugu macquulsan. Qaar ka mid ah qubeyska leh marin biyoodyo kala duwan, qaabeynta ayaa marba marka ka dambeysa aad u sii kordheysa oo bini aadamnimo ah, waxaa lagu hagaajin karaa doonista banaanka hawada, roobka, mowjadda, togagga iyo marinka kale ee biyaha, iyadoo la raacayo xawaarahaaga "qubayska", si loo hagaajiyo raaxada qubeyska iyo raaxada qubayska.
Rakibaadda iyo dhismaha: hubi awoodda culeyska xambaarsan ee darbiga rakibaadda iyo xaaladda joogsiga biyaha ee qubeyska
Kahor rakibida qubayska, ka sokow go'aaminta biyaheeda, waxa ugu muhiimsan waa in laga ilaaliyo qubeyska biyaha ka dib xaaladda joogsiga biyaha, haddii biyaha baaritaanka ee qubeyska ay si aan kala go 'lahayn u qulqulayaan, laguma talinayo inaad iibsato oo aad rakibto .
Nidaamka rakibidda qubaysku waa mid fudud, haddii aad doorato inaad aastid qubeyska darbiga, dhismaha waa inuu tixgeliyaa awoodda xamuul qaadista ee darbiga rakibidda. Meelaha lagu maydho waa weyn yihiin, waxay u baahan karaan biyo badan dhowr jeer isla waqtigaas si loo hubiyo xaddiga biyaha.
Soo koobid Tifatiraha:
Shaqada qalabka qubeyska ayaa si aad ah u sii fiicnaanaya, qubeys badan oo shaqeynaya iyo tiirarka qubeyska oo inta badan lagu daro iibsi dhan, qoyska guud wuxuu doortaa isku-darka ugu jaban uguna hufan ee qubeyska gacanta, tiirarka qubeyska wiishka, qasabadda bannaanka. In kasta oo ay jiraan shaqooyin badan oo ka mid ah alaabooyinka qubeyska, haddana weli waa muhiim in qalabku ku habboonaado jawiga musqusha shaqsiyeed si loo abuuro meesha ugu wanaagsan ee ugu habboon uguna wanaagsan ee lagu maydho nolol maalmeedka.
Hore:: 51 Qarsoodiga Naqshadaynta Musqusha, Markaa Waxaad Qaadaysaa Qubeys Kulul Oo Diiran Xilliga Jiilaalka! Next: Musqusha Musqusha oo bilaa Bixin ah, Musqul lagu Rakibay gidaar lagu rakibay, Ficil iyo Quruxba leh